तस्विरहरु: "Kei कार" आनन्द गरौं! - Best of Japan
जापानमा केइ कारहरू
परम्परा र आधुनिकता को सामंजस्य (2) आधुनिकता! नौकरानी क्याफे, रोबोट रेस्टुरेन्ट, क्याप्सल होटल, कन्वेयर बेल्ट सुशी ... >
यदि तपाईं जापान आउनुभयो भने, तपाईंले पाउनुहुनेछ धेरै साना कारहरू छन्। यसलाई "केइ कारहरू （軽 自動 車, K-car）" भनिन्छ। जापानी कारहरु संसारभर मा निर्यात गरिएको छ, तर Kei कारहरु बिरलै निर्यात गरिएको छ। केई कारहरू खरीद गर्दा, तपाईं सामान्य कार भन्दा कम कर तिर्नुहुन्छ। त्यसो भए जापानमा मानिसहरू प्रायः दोस्रो र तेस्रो कारको रूपमा केइ कारहरू किन्छन्। आज जापानमा सबै कारको एक तिहाइ केइ कारहरू हुन्। केई कारहरू कानून द्वारा ulated.3.4 मीटर वा कमको कुल लम्बाई, १.1.48 मीटर वा कमको कुल चौडाई, र २ मिटर वा सो भन्दा कमको कुल उचाइ पाउन नियमन गरिन्छ। त्यसोभए यो सानो छ, तर केहि कारहरू १.2 मीटर भन्दा बढि छन्। टोयोटाको प्रीमियम कार भन्दा यी कारहरूको केबिनहरू लामो र अग्लो छन्। तपाईं भाँडा कारमा केई कारहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न केई कारहरूको मजा लिन चाहनुहुन्छ?
केई कारहरूको फोटो
"आधुनिकता" मा फर्कनुहोस्